ဝေါဟာရမော်ကွန်း - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
အဝေးသင်, အတိုင်းအတာ, လူတွေအတွက်အရွယ်အစားနှင့်အမှုအရာတို့ကို
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 5, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ? ဒါဟာတာရှည်လမ်းလား? ဒါဟာတာရှည်လမ်းလား? အလွန်ဝေးပါသလဲ? အလွန်ဝေးပါသလဲ?
အဘယ်သူမျှမရုံထောင့်ပတ်လည်၌။ / မိနစ်လမ်းလျှောက်၏စုံတွဲတစ်တွဲ (= အလွန်အနီး) ။
အဘယ်သူမျှမ, မနီးမဝေး။ / အဘယ်သူမျှမခန့်ငါးသို့မဟုတ်ဆယ်မိနစ် '' လမ်းလျှောက် (= အတော်လေးအနီး) ။
yeah အတော်လေးရှည်လမ်း။ / ဟုတ်, တစ်မိုင်ကျော်။
ဟုတ်ကဲ့ကရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ / ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ / ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်လမ်းလျှောက်ဖို့ဝေးလွန်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် '' ကတာရှည်လမ်းဖွင့် '' ဆိုသညျကား, 'ဝေးရဲ့' 'ဟုမဆိုကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလမ်းလျှောက်ဖို့ဝေးလွန်းရဲ့ '' လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ငါတို့သည်ဤကဲ့သို့, နာမ်အထက်တွင်သို့မဟုတ်သူတို့ထံမှဖွဲ့စည်းထားသော adjective နာမဝိသေသနကို အသုံးပြု. အရွယ်အစားကိုဖော်ပြရန်နိုင်သည်
၏အရှည် / အကျယ် / အမြင့် / နက်ရှိုင်း / အရွယ်အစားကဘာလဲ ... ?
ဘယ်လောက်ကြာ / ကျယ်ပြန့် / မြင့်မားတဲ့ / အရပ်ရှည်ရှည် / နက်ရှိုင်း / ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် ... ?
•ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်လူများ, သစ်ပင်များနှင့်အဆောက်အဦးကိုဖော်ပြရန်အရပ်ရှည်ရှည်သုံးတတ်၏ တောင်ကိုဖော်ပြရန်မြင့်သော။ ငါတို့သည်လည်းထပ်မြင့်အဆောက်အဦးကဆိုသည်။
•သတိပြုပါလည်းဤမေးခွန်းများအဖြေအတွက်တစ်ဦးနာမဝိသေသနဟာတိုင်းတာခြင်းအောက်ပါအတိုင်း: အဆိုပါဥယျာဉ်ကိုအကြောင်းကိုတဆယ်မီတာကျယ်ပြန့်သည်။ (= အဆိုပါအကျယ်အကြောင်းကိုတဆယ်မီတာဖြစ်ပါသည်။ )
လူများနှင့်အရာရာ၌ Size ကို
ရှည်လျားသောစာအုပ် (= အများအပြားစာမျက်နှာများ) (မတိုတောင်းသောစာအုပ်)
နက်ရှိုင်းတဲ့ရေကန် (= အများအပြားမီတာ) (မတိမ်အိုင်)
အင်္ဂလိပ်စကားပြောလူမျိုးအဘို့ကြီးစွာသော (infml) = စိတ်ကူး။
သငျသညျအဝတ်အစားတွေအတွက်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်လိုလျှင်, သင်ပြောပါ: အကယ်. သင်သည်အဘယ်အရာကိုအရွယ်အစားရှိသနည်း or သငျသညျအဘယျသို့အရွယ်အစား (ဖိနပ်) ကိုယူသလဲ? သင်မသိသောလျှင်, သင်တိုင်းတာရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား သင်္ချာဝေါဟာရ, စကားစု3 မှတ်ချက်
မတ်လ 8, 2018 ဧပြီလ 20, 2012 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
ဆက်ဖတ်ရန်အတိုက်အခံ (သို့မဟုတ်နာမ်) ကဝေါဟာရစာရင်း
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား စကားစု3 မှတ်ချက်